Nirefotra ny basy teny Malaza Andoharanofotsy: lehilahy iray naratra voatifitra teo amin’ny tendany | NewsMada
Par Taratra sur 24/02/2020
Ankoatra ny volabe, izay voalaza fa mitentina 14 tapitrisa Ar voaroba, naratra mafy noho ny tifitra nahazo azy ny lehilahy iray, notafihin’ny andian-jiolahy nirongo fiadiana sy nandeha môtô, teny Malaza Andoharanofotsy, ny marainan’ny asabotsy teo.
Manodidina ny tamin’ny 07 ora sy sasany maraina no nizotra nihazo an’Ankaraobato, hividy entana ny fiara Fourgon Mercedes iray, nahitana mpandeha miisa dimy avy any Malaza. Tsy mbola lasa lavitra akory ny fiara fa teo amin’ny “casseur de vitesse” teny an-toerana no nandeha mora ity farany. Teo indrindra ireo olon-dratsy miisa enina, tamina moto miisa telo izay nifanena tamin’ilay fiara Fourgon Mercedes no nanararaotra ny asa ratsiny. Lasibatr’ireo jiolahy tamin’izany ny mpamily ka notifirin’izy ireo teo amin’ny tendaniny. Vokany, lasan’ireo olon-dratsy ny vola mitentina 14 tapitrisa izay saika nividianana entana. Vita izay, nirifatra nitsoaka ireo olon-dratsy. Raha ny filazan’ireo nanatri-maso, nisy nisaron-tava ireo jiolahy raha tsy nanao izany kosa ny hafa.
Hita teny ny “douille”
Naratra mafy ilay mpamily taorian’ny tifitra nahazo azy ary ahina mafy ny ainy. Raha ny filazan’ny polisy nanao famotorana, ny tompon’ilay fiara no nitondra ity niharam-boina ity nihazo ny hopitaly. Ary nofehezin’ny mpitandro filaminana avy hatrany ny toerana nitrangan’ny fanafihana.
Taorian’ny famotorana nataon’ireo mpitandro filaminana, tsikaritr’izy ireo tamin’izany ny vodina bala na “douille- 9mm” tamin’ilay basy poleta nampiasain’ireo jiolahy.
Nangataka ireo mponina eny Malaza ny hametrahana “caméra de surveillance” hisorohana ny fanafihana mitam-basy toy ireny. Misokatra ny famotorana.
Tsikaritra tato ho ato fa amin’ny andro mazava avokoa no hanaovan’ireo olon-dratsy ny asa ratsiny. Mipetraka eto ny fanontaniana hoe “défi” hataon’ireo tsy mataho-tody amin’ireo mpitandro filaminana ve izany izao tranga mifanesisesy izao?